Nanamarika ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety tany Mozambika ny tahotra sy ny tsy fandriampahalemana · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny Español, English, English, বাংলা, Ελληνικά, Português
Ankoatra ny fiarovana ny mpanao gazety, dia mbola misy tolona iray hafa amin'ny tolo-kevitry ny mpanao lalàna vao haingana hanitsiana ny lalànan'ny asa fanaovan-gazety ankehitriny. Sary: Giovana Fleck/Global Voices
Tamin'ny fankalazana ny Andro Erantanin’ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovan-gazety, izay nankalazaina ny 3 Mey dia nanaitra ny saina ireo mpanao gazety amin'ny tokony hanajana ny zo amin’ny fahazoana vaovao sy hahafantatra vaovao amin’ny fomba mahaleo tena, nanameloka ny famoronana lalàna mety hanakana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, ary nitaky ny filàna fiarovana ho an’ny mpanao gazety. Araka ny voalazan’ny filohan'ny MISA Mozambika, sampan-draharaham-paritra miaro ny fampitam-baovao aty Afrika, hoe:
Ny hany fomba hampitsaharana ny heloka bevava atao amin'ny mpanao gazety dia ny fahazoana antoka fa tsy hahazo valisoa ho tsimatimanota izay manao izany heloka izany . Tsy azo eritreretina fa 19 volana taorian’ny nanjavonany, tsy hita ny dingana efa noraisin'ny tompon’andraikim-pirenena tamin’ny fanazavana ny raharaha Mbaruco .
Araka ny filazan'ny Reporters Sans Frontières, any amin’ny laharana faha 116 amin'ny 180 no misy an'i Mozambika, araka ny tombana 2022. Mampiseho fihintsanana toerana valo izany raha oharina tamin’ny taona 2021. Nanamarika ny fikambanana fa tokony hiantohan’ny lalàm-panorenana sy ny lalàna momba ny asa fanaovan-gazety sy ny zo hahazo vaovao ny fahalalahana sy ny fahaleovanten'ny asa fanaovan-gazety. Saingy zara raha ampiharina ilay lalàna, ao anatin'ny tontolo voamariky ny fitomboan'ny fitondrana jadona sy ny fihasarotan'ny fahazoana vaovao.
Talohan'io andro io, ny 11 aprily 2022, nankalaza ny andron'ny mpanao gazety i Mozambika, daty noforonina ho fanomezam-boninahitra ireo matihanina amin'ny fampitam-baovao ao amin'ny firenena. Tao anatin'ny hafatry ny fetibe sy fankasitrahana ny asa vitan’ny mpanao gazety, voamariky haketrahana noho ny ady mitam-piadiana any avaratr'i Mozambika ny andro.
Hatramin’ny nipoahan'ny ady tao Cabo Delgado tamin'ny taona 2017, maromaro ny tranga fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahazoana vaovao notaterina tsy tapaka tao amin'ny firenena, indrindra fa ny fanjavonan’ireo mpanao gazety na fandavana ny fanomezana vaovao heverina ho tombontsoam-bahoaka.
Tranga miavaka ny tsy mbola namantarana ny toerana misy an'i Ibrahimo Mbaruco, mpanao gazety, izay nanjavona tamin'ny taona 2020 raha niasa tany akaikin'ny faritry ny ady tany avaratr'i Mozambika. Nanjavona ilay mpanao gazety tamin'ny 7 Aprily tamin'io taona io, rehefa voahodidin'ny miaramila, araka ny nolazainy tamin'ny fianakaviany. Nandritra izany fotoana izany, roa taona taty aoriana, mangina ny manampahefana, araka ny nolazain’ny MISA-Mozambika, tambajotram-paritra miaro ny mpanao gazety hoe:
Kely ny fantatra momba ny zava-nitranga ary vao mainka kely aza ny momba ny fanadihadiana. Tsy nahazo vaovao izahay hatramin'izao na dia teo aza ny hetsika rehetra nataonay hifandraisana tamin'ny manampahefana ao amin'ny governemanta, ny manampahefana mpanao famotorana momba ny heloka bevava ary ny Biraon’ny Fampanoavana.
Ireo no teny farany re avy amin'ilay mpanao gazety Mozambikana Ibraimo Abú Mbaruco talohan'ny nanjavonany tao Cabo Delgado, roa taona lasa izay androany.
Tamin'io fotoana io, raha tsy niresaka ny raharaha Ibrahimo Mbaruco, niresaka momba ny andraikitry ny mpanao gazety amin'ny ady misy ao amin'ny firenena ny filohan'ny Repoblika ary nilaza hoe:
Ireo matihanina amin'ny Fampitam-baovao, amin’ny andraikitra sahaniny sy ny fitiavan-tanindrazana, dia nampahafantatra amin'ny fomba matihanina amin'ny firenena Mozambikana sy izao tontolo izao, ny vaovaon'ny hetsika ataon'ireo maherifon’ny Tafika sy ny Fiarovam-pirenena (FDS), manohitra ny fampihorohoroana sy ny ekstremisma mahery setra any amin'ny distrika sasany ao amin'ny faritanin'i Cabo Delgado.
Ankoatra ny fiarovana ny mpanao gazety, sarangan’ady hafa indray no mitranga eo amin’ny raharaha vao haingana momba ny tolo-kevitry ny mpanao lalàna mikasika ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana. Mihevitra izany tolo-kevitra izany ho fandrahonana ny zo hahazo vaovao ireo mpanao gazety.
Ezaka ataon’ny Fitondrana hanakatsakanana ny asan’ny mpanao gazety izany. Ho tena fanimbazimbana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny asa fanaovan-gazety ao Mozambika ireo lalàna roa ireo raha eken'ny Parlemanta ka tsy misy ny fanitsiana naroson'ny fiarahamonim-pirenena.
Olana iray hafa atrehin'ireo matihanina amin'ny fampitambaovao ao Mozambika ny fanorisorenana ara-nofo eny amin'ny toeram-piasana, izay nilazan'ny mpanao gazety sasany fa mampidi-doza ny asan'ny vehivavy io fomba fanao io, hoy ilay mpanao gazety Cléusia Chirindza. Ho azy, “(…) any amin’ny efitra famoaham-baovao sasany, tsy omena lanja araka ny tokony ho izy ny mpanao gazety, indrindra ho an’ireo izay vao manomboka manao ny asany”, hoy izy nanampy.
Nohavaozin'ny mpanoratra hisaintsainana ny fankalazana ny Andron'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovan-gazety ny ampahany voalohany amin'ity lahatsoratra ity.